एकल महिलासँग बिबाह गर्नुहोस अनि लिनुहोस यस्ता फाइदाहरु… – Butwal Sandesh
प्रत्येक केटिहरुको सपना हुन्छ कि उसको आफ्नो बिबाह यस्तो ब्यक्ती सँग होस् जसले जिबन खुशी ले भर्दियोस । सारा जिबन उसैको साथमा बितोस , उसलाई धेरै नै माया दिऊ । तर दुर्भाग्यवश सबै केटिहरुको लामो समयसम्म बिबाह पछिको सपना पूरा हुँदैनन् । कहिलेकाही कुनै दुर्घटनाको कारण बिबाहित महिलाको श्रीमानको मृत्यु हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसको सारा खुशिहरु चकनाचुर हुन्छ साथै उस महिलामा एकल हुनुको “दाग” पनि लाग्छ ।
त्यसैपनी नेपाल बिस्तारै-बिस्तारै बिकासको फड्को मारिरहेको छ । तर आजपनी हाम्रो समाजमा एकल महिलाहरुको लागि हेर्ने नजर राम्रो छैन । कयौं बर्ष देखि , पिछडिएका मान्छेहरुको सोच यस्तो पनि छ, जो आफ्नो श्रीमानको मृत्यु हुनुको कारण उहीँ एकल बुहारीलाई नै ठहर्‍याउछन् । उहीँ दुखी महिलालाई नै घरको लागि शुभ-अशुभ मान्न थाल्छन् , यहाँसम्म कि उनलाई घृणात्मक नजरले पनि हेर्न थाल्छन् ।
तर किन यस्तो सोच राख्ने मान्छेहरू कहिले यो सोच्दैनन कि , उस महिलामा के बितिरहेको छ भनेर । जसको पूरा जिबन नै एकपाटो चकनाचुर भैरहेको छ ? निश्चिय नै , हाम्रो समाजलाई एक प्रमुख सुधारको आवश्यकता छ । यस्तो परिस्थितिमा समाजले फ़ेरि ति महिलाको जिबन कसरी हराभरा पार्दिने भनेर सोच्नुपर्छ । उस महिलाको शुन्य जिबनमा फ़ेरि बहार कसरी ल्याउन सकिन्छ । सम्भव भएसम्म सासू-ससुराले बुहारीलाई छोरी सरह गरि उसको दोस्रो बिबाह गराइदिनुपर्छ ।
यद्यपि , समस्या यो छ कि धेरै लाई एकल महिला सँग बिबाह गर्नलाई उचित लाग्दैन । उनिहरुलाई लाग्छ कि उस महिला मा अशुभ को कारण दोस्रोपटक बिबाह भएपछि कुनै अन्य नंया घरमा जाओस् । तर आश्चर्यको कुरा यो छ कि , यश बिकसित आधुनिक बन्दै गएको समाजमा अझै पनि यस्तो सोच राख्ने धेरै मान्छेहरू छन ..। जसले यस्तोखाले अन्धबिश्वास मा यकिन गर्छन् , हामिले यस्तो अन्धबिश्वास मा बिश्वास गर्नु हुँदैन ।
( तर तपाइँले यो थाहा पाएपछि छक्क पर्नुहुने छ कि एकल महिला सँग बिबाह गर्दा खेरि तपाइँलाई धेरै नै फाइदा हुनसक्छ .. । आज म यही फाइदामा केहि चमक लगाइ दिन्छु। र यो लेख्ने कोशिश गर्दछु कि , एक एकल महिला सँग बिबाह गर्दा कति फाइदा हुनसक्छ भनेर ।)
एकल महिला सँग बिबाह गर्दाको फाइदा….
एकल महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई पहिला नै गुमाइ सकेकी छिन् । यस्तो अवस्थामा उसलाई आफ्नो जिबनसाथि को महत्त्व राम्रोसँग थाहा छ , कि यो जिन्दगिको कुनै भरोसा छैन । जसले जतिबेला पनि साथ छोड्न सक्छ , त्यसैले उनी तपाईं सँग जिबनको हरेक पल राम्रोसँग बिताउने प्रयास गरिरहन्छिन। साथै तपाईंको सानो-सानो कुरामा झैझ’गडा पनि हुँदैन, उसले तपाईंको हरेक मुस्किल समयमा साथ निर्भाह गर्नेछिन । किनकि तपाईंले पनि उसको मुस्किल घडिमा साथ दिनुभएको थियो ।
लकडाउन अगाडि अमेरिकामा एकल महिलाहरू मा एक रिसर्च भएको पनि थियो । जसमा यो अगाडि आयो कि यि एकल महिलाहरु धेरै नै इमानदार र समझदार पनि हुन्छन् । किनकि यिनिहरुको नजरमा सम्बन्धको मुल्य थाहा हुन्छ, यिनिहरु यस कुरा बुझ्छन् कि सम्बन्धमा झुट र धोका को कुनै दायर हुँदैन भन्ने बुझ्छन् । साथै एक एकल सँग घर सम्हाल्ने अनुभव पनि त हुन्छ । आफ्नो जिबनमा दु:ख पीडा को पहाडबाट गुज्रिएकि एकल महिला पहिला नै यतिधेरै परिस्थितिहरु पार गरिसकेकी हुन्छन्..।
उनले तपाईं सँग कुनै कुराको गुनासो गर्दैनन् नक्कल झक्क्ल पार्दैनन । यतिमात्र हैन , केही ठुलै समस्याहरु आइपर्छन भने तब उनी निराश भएर कुनामा बस्ने हैन कि , आफुलाई सम्हाल्न र त्यो समस्याबाट मुक्त हुने प्रयास गर्नेछिन । त्यसैले साथिहरु हाम्रो समाज अब सतर्क हुन आवश्यक छ, हामीले हाम्रो समाजको सोच-बिचार बदल्नुपर्दछ । देश आधुनिक समाजको यस बर्गलाई फ़ेरि सम्मान दिने सोच राख्नु पर्दछ । ( लेखक सन्तोष कार्की मौसुफ – सामाजिक संजालबाट)
2 thoughts on “एकल महिलासँग बिबाह गर्नुहोस अनि लिनुहोस यस्ता फाइदाहरु…”
मोहन प्रसाद आचार्य says:
बास्तव मै धेेेरै राम्रो कुरा। आजको समाज धेरैनै तडकभडक र हतारमा छ जहाँ धेरै कुरा र व्यवहार अज्ञानता बस भइरहेका हुन्छन जस्ले दुर्घटना सिवाए कहि निम्ताउदैन।
समाजमा रहेका एकल महिला रहनु र हुनु पनि अधिकांश यस्तैनै परिवेसले छन्। एकल महिलाहरुका अनुभव र ब्यवहारलाइ सहज रुपमा बुझेर पुन समाज ले स्बिकार गरि परिवारिक जिवनको सुरुवात गर्ने हो भने अनुभव र जीवन पुन स्वर्ग हुन सक्छ । साथै एकल महिला र पुरुष समाज र देश का उदाहरण बन्न सक्छन।
Butwal Sandesh says:
Positive thinking Mr. Mohan Prasad ji.